Madaxweynaha Jubbaland oo qaabilay madaxa Hey’adda Qaxootiga Adduunka ee UNHCR “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kismaayo, December, 18, 2017- Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo uu dhinac fadhiyo Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno ka tirsan golaha Wasiirada ayaa maanta kulan la qaatay madaxa Hey’adda Qaxootiga Aduunka ee UNHCR Flippo Grandi oo uu wehelinayo Wakiilka Hey’ada ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey iyo Masuuliyiin kale.
Kulankan oo ah kii ugu horeeyay oo noociisa ah waxaa diirada lagu saaray warbixinadii ugu danbeeyay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii dhawaan kasoo laabtay xerada Qoxootiga Dhadhaab iyo sidii loo dardar galin lahaa soo celinta kuwa wali maqan.
Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in rajo wanaagsan uu ka qabo in hawlaha socda ay guulaystaan balse mar walba uu jiro walaac ay dadku ka qabaan waxa uu mustaqbalku noqonayo marka ay Soomaaliya dib ugu soo laabtan.
Madaxweynaha Jubbaland wuxuu sheegay in dhibaatada dhinaca amniga ah ay wax badan xadidayso oo laga yaabo in hadii dhulka la xorayn lahaa ay noloshu is furfuri lahayd.
Dowlada Soomaaliya iyo beesha Caalamka ayuu ugu baaqay in ay xoogga saaran dib u xoraynta dalka oo uu sheegay ka Jubbaland ahaan in ay diyaar u yihiin.
“Dadka soo noqonaya anagaa u baahan Aqoontooda, waayo aragnimadooda iyo cududooda maadama ay inta ugu badan dhallinyaro yihiin “ ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland.
Sidaas oo ay tahay ayuu Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam sheegay in hadii aan la helin jiho sax ah oo dadkaas loo hago ay macquul tahay in looga faa’iidaysto wadooyin kale oo khaldan, taasna ay kawada shaqaynayaan Dowladda Federaalka ah sidii looga hortagi lahaa oo dhallinyarada mustaqbal wanaagsan loogu abuuri lahaa.
Arday dhameysatay tababar xirfado shaqo lagu barayay oo shahaadooyin la gudoonsiiyay "SAWIRRO"